के मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुन लागेकै हो ? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने विषय यसअघि पनि चर्चामा हुने गथ्र्यो। सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै केही मन्त्री परिवर्तन गर्ने चर्चा चलेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल मन्त्री परिवर्तन नहुने बताएका थिए। तर सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दासमेत मन्त्रीहरुले सोचे अनूरुपको काम गर्न नसकेको भन्दै फेरि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको चर्चा सुरु भएको छ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारको कार्य सन्तोजनक रहेको भन्दै केही मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री र दाहालबीच केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रचण्डले मंगलबार विराटनगरमामा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रिमण्डल हेरफेरका विषयमा छलफल भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली देखिने गरी र जनताले अनुभव हुने गरी काम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर कतिपय मन्त्रीले भने कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसकेपछि केही मन्त्री नै परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्री परिवर्तन पर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए। जवाफमा प्रचण्डले यसमा मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको नै हुने बताएका थिए। ‘हाम्रो सिस्टममा प्रधानमन्त्रीकै अधिकार क्षेत्रभिकको कुरा हो। आवश्यक परेका खण्डमा दुवै अध्यक्षबीच छलफल भएर हेरफेर पनि हुनसक्छ। मूल्यांकन गरेर हेर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई छ,’ प्रचण्डले मंगलबार भनेका थिए।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल, भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियार राई, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबावु पण्डित र खानेपानी मन्त्री विना मगरको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्।
त्यसो त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थमन्त्री उपेन्द्र यादवको कामप्रति पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। तर यी दुवै जनालाई तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा प्रधामन्त्री छैनन्।